Mayelana NATHI - Jinhua Panda Outdoor Sports Co., Ltd.
Imidlalo yePanda yangaphandle
Uyemukelwa emidlalweni yethu yangaphandle yePanda.
Singamafemu anamandla futhi asebenzayo eChina, eqenjini elihle, umholi ubaluleke kakhulu.
1) Siqashe umphathi wezokukhiqiza oqeqeshiwe kakhulu eChina ukulawula ikhwalithi nokulethwa kwemenenja yesikhathi sefektri besisebenza embonini yokukhiqiza ibhodi iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu, futhi abasebenzi abangaphezu kuka-20 benze isipiliyoni somsebenzi webhodi eminyakeni eyishumi.
I-2) Ithimba lethu le-Graphics eliqukethe i-AI Graphic Designer kanye nochwepheshe wezobuciko emisebenzini yakho ukuqinisekisa ukuthi umqondo wakho wezithombe uphinde wenziwe ngokusobala ku-taste.we yakho futhi sinikela ngezinsizakalo zokubonisana zamahhala zokukusiza ukuthi ubonise noma yimuphi umqondo ongakhulelwa, konke ukuklama kukhululekile ukukhokhisa.
I-3) Ithimba lethu lokuthengisa lisencane kakhulu futhi linomfutho, sizolandelela imininingwane ye-oda ngalinye, isikhathi sokulethwa, ukulawula ikhwalithi kanye nesevisi yokuthengisa ngemuva.
Jinhua panda ongaphandle ezemidlalo, esungulwe ngo-2015, neqembu lochwepheshe njengoba okukhethekile omunye wabakhiqizi ngobukhulu ukuklama nokwakha ahlukahlukene ibhodi inflatable, sukuma gwedla ibhodi, skateboard, racing ibhodi, surf ukutakula ibhodi. ibhodi lokudoba, ibhodi ye-yoga, ibhodi lezingane, ibhodi lekite, ibhodi lokuntweza, ama-kayaks, njll.
Wonke amabhodi ethu abunjwe ngomshini we-CNC, ukwakheka kuzoba ngokunembile, ngokunembile, futhi ngokungaguquguquki, futhi abasebenzi bethu abanolwazi oluphakeme bazokwenza ngokucophelela kuwo wonke amabhodi, ngenkathi benakisisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Siphinde sikhiqize izesekeli ezahlukahlukene, ezinjengama-paddles, isikhwama sebhodi, isikhwama se-paddle, ama-leashes, ijakhethi yempilo, isihlalo se-EVA, isikhwama esingenamanzi, njll.
Yini esingakunikeza yona
Sise-Top surfing sikunikeza isiqiniseko sokuthi zonke izidingo zakho, ukucaciswa kuzohlangana nokusebenza kahle kakhulu, amanani entengo amahle kakhulu nekhwalithi eqinisekisiwe.
Sinamathela ezinkambisweni zethu zekhwalithi eqinisekisiwe, udumo nokulethwa ngesikhathi esifanele.
Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ukukhula kuvela ekulaleleni izidingo zamakhasimende ethu ngakho-ke sisungule iziteshi eziningi zokuxhumana futhi sikumema ukuthi usinikeze iziphakamiso ezingathuthukisa imikhiqizo yethu yesikhathi esizayo, Ukwaneliseka Kwekhasimende kuyinjongo yethu enkulu.
Xhumana nathi namuhla ngobuhlobo bebhizinisi obunezithelo futhi obunenzuzo.